Iindaba -Ukunxiba njani ulondolozo lwebracelet smart?
1. Gcina izixhobo ezicocekileyo zicocekile. Coca izihlahla zakho kunye nezacholo ezi-smart rhoqo, ngakumbi emva kokuzilolonga, ukubila, okanye ukudibana nolusu ngezinto ezifana nesepha okanye isepha. Ezi zinto zinokuncamathela ngaphakathi kwisangqa; Sukusebenzisa isicoci sendlu ukucoca isongo. Endaweni yoko, sebenzisa isepha engenasepha, uhlambe kakuhle kwaye umile ngetawuli ethambileyo. Amabala okanye amabala ekungelula ukuwasusa, hlikihla ngebrashi yamazinyo ethambileyo, efumileyo kwaye ulandele amanyathelo angentla.
2. Gcina yomile. Nangona izixhobo ezikrelekrele zingangeni manzi, ukunxiba isongo esimanzi ixesha elide kuyingozi kulusu lwakho; Ukuba isongo sakho simanzi, njengokubila okanye ukuhlamba, yihlambe kwaye uyomise ngaphambi kokuyibuyisela. Qinisekisa ukuba ulusu lwakho lomile ngaphambi kokuba ubeke isongo.
3. Phumla izihlahla zakho. Qiniseka ukuba isongo alixinene kakhulu. Qiniseka ukuba izacholo zona azixinene kakhulu. Kuyacetyiswa ukuba ushiye isithuba phakathi kwebhendi kunye nesihlahla ngomnwe omncinci wokutyibilika ngapha nangapha. Ukuba uyisebenzisela ukufumana olona nyango lufanelekileyo lokufunda olunokwenzeka, unokufuna ukukhawulela isongo ngelixa uzilolonga. Ukuba kunjalo, khumbula ukulungisa ubungqingqwa emva kokuzilolonga kwakho. Ubundlobongela kunye nobukhoboka ixesha elide zinokucaphukisa ulusu lwakho, ke susa isongo ngeyure emva kokunxiba ixesha elide.